Tsy mahazo mivorivory : nahemotra ny « Kaoferansa momba ny soratra 2017 » | NewsMada
Tsy mahazo mivorivory : nahemotra ny « Kaoferansa momba ny soratra 2017 »
Vina sy fanambin’ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ny hametraka amin’ny toerana sahaza azy ny teny sy ny soratra malagasy. Misy noho izany ireo asa sahanina sy tontosaina.
Anisan’ireo hetsika tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (KHT) ny « Kaoferansa Momba ny Soratra 2017 » na ny « KMS 2017 ». Noho ny fandrarana tsy hahafahana mivorivory vokatry ny valanaretina pesta, nanapa-kevitra ny KHT fa hahemotra amin’ny fotoana mahamety azy ny « Kaonferansa Momba ny Soratra 2017 ». Marihina fa anisan’ny fihaonana manana ny lanjany eo amin’ny tontolon’ny soratra ny KMS, noho ny fananany lohahevitra maro. Avy amin’ireny no ifanakalozan-kevitra eo amin’ny mpizaika.
Anisan’izany ny lohahevitra hovelabelarin’i Rima (Herimanjaka Tsilavo Manantsoa) : « Asa soratra sy ny teknôlôjia vaovao toy ny aterineto, facebook, wordpress, sns ». Hobiana : « Ny tononkalo: hita izay ny very fa ny hita indray no miery ». Aja (Andrianirina Jules Aimé) : « Ny Malagasy tsy tompon’ny teniny sy ny tenany manoloana ny asa fanoratana ». Riambola : Mitia : « Ny fiarahamonina: feo iaingana sy sary itarafana ny fivoaran’ny literatiora malagasy ankehitriny » ary « Ny lanjan’ny soratra ao anatin’ny filazam-baovao », hovelabelarin-dRazafindrakoto Hary.
Fantatra fa hivelatra tsikelikely eo amin’izay tontolon’ny soratra izay ireo hetsika hotontosain’ny KHT noho ny fahatsapana ny maha zava-dehibe azy io eo amin’ny fiarahamonina sy ny firenena ary izao tontolo izao mihitsy.